လစ်သူယိုးနီးယားနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး လစ်သူယေးနီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားလစ်သူဒါးမှ Residency အစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များသည်လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ လစ်သူယေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၊ ဒုတိယအနေဖြင့်လစ်သူဘာနီးနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ , အမြဲတမ်းနေထိုင်သူလစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့်လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လစ်သူယန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား၊ လစ်သူမန်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လစ်သူယန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လစ်သူမွန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လစ်သူမွန်နိုင်ငံသားနေထိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ , လစ်သူးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ လစ်သူယန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ လစ်သူးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လစ်သူ၊ ဒုတိယနေထိုင်နိုင်ငံနှင့်လစ်သူပို။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ လစ်ဗျားနိုင်ငံသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လစ်သူးယားနိုင်ငံ၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လစ်သူးယားနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဗီဇာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ လစ်ဗျားရှိရွှေဗီဇာ၊ လစ်သူးနီးယားမှရွှေဗီဇာ၊ လစ်ဗျားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ လစ်သူးနီးယားနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်လစ်သူးနီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ လစ်သူးနီးယားတွင်နေထိုင်သောရွှေဗီဇာ၊ လစ်သူးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်လစ်သူယေးနီးယားတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 300,000
လစ်သူနီးယားသည် Baltic ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်ရှိသည်။ ဒေသတွင်း၌စတုရန်းမိုင် ၄၀,၅၀၀ ကျော် (၆၅၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ကျော်သည်ပိုလန်နှင့်အနောက်တောင်ဘက်ရှိ Kaliningrad (ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း)၊ အရှေ့ဘက်တွင်ဘီလာရုစ်နှင့်မြောက်ဘက်တွင်လတ်ဗီးယားနိုင်ငံများသို့ဖြန့်ဝေသည်။ ထိုနိုင်ငံသည်ဒေသလေးခုအဖြစ်သီးခြားစီရှိနေသည်။ Aukštaitija၊ အရှေ့ဘက်ရှိကောင်းသောနိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံ၏အဓိကနေရာများ၊ Zemaitija, အနောက်ဘက်စိမ့်, Baltic ကမ်းရိုးတန်းကနေNevėžisရေလမ်းအထိ; အရှေ့တောင်ဘက်တွင်Dzūkija; နှင့်အနောက်တောင်ဘက်တွင် Suvalkija ။ လေထုသည်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိကုန်းမြေနှင့်မတူညီသောဇုန်များရှိကုန်းမကြီးဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ရာသီဥတုမှာကမ်းခြေရှိထင်းရှူးပင်များနှင့် Curonian တံတွေးထွေးသည့်သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့်နိမ့်ကျသောကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ရွေ့လျားလျှက်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်းမြင့်ဒေသများတွင်ရေကန်ပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
မြို့တော်ဗီလ်နီယပ်စ်သည်နိုင်ငံ၏အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် Neris နှင့် Vilnia မြစ်ဆုံ၌တည်ရှိသည်။ ဗီလ်နီးယပ်စ်သည် ၁၄ ရာစုနှစ်မှစပြီးမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၉ မှ ၁၉၃၉ အထိပိုလန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုတိုးချဲ့သည့်အချိန်တွင်မှ လွဲ၍ ကနူသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
နိုင်ငံများစွာ၌ကဲ့သို့ပင်လစ်သူယေးနီးယားလူမျိုးများသည်သူတို့၏အခမဲ့စွမ်းအင်စားသုံးရန်၊ တီဗီကြည့်ခြင်း၊ အမျိုးသားအများစုသည်အမျိုးသမီးများသည်အားကစားနည်းများကိုလိုက်စားလေ့ရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည်စတိုင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာထားလိုသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လစ်သူယေးနီးယားလူမျိုးများသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ၃.၅ နာရီတီဗွီဖန်သားပြင်တွင်ဖြတ်သန်းသွားကြသည်။ ၎င်းသည်အဓိကဖျော်ဖြေရေးသမားများနှင့်တီဗွီဇာတ်ကောင်များကိုလူသိများသောအမည်များဖြစ်စေသည်။ ယေဟောဝါသက်သေများသည်အနီးအနားရှိတီဗီရှိုးများ၊ အများအားဖြင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောရုပ်ရှင်များ (လစ်သူယေးနီးယားရုပ်ရှင်ပြန်ခုန်ထွက်မှုများပြုလုပ်သည်) နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောနှင့်အနီးအနားရှိတီဗီအစီအစဉ်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်တွေ့ရသည်။ ရုပ်ရှင်တွေဟာလူသိနည်းတယ်၊ သို့သော်ပြဇာတ်ရုံမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လက်ရာအဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်
ဝဘ်မှနားလည်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ရေးသားခြင်းသည်မျှတမှုရှိသည်။ အလားတူစွာလစ်သူယေးနီးယားအနုပညာလက်ရာများ၏အစိတ်အပိုင်းအများစုသည်အကြမ်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောလစ်သူယိုးနီးယားသမိုင်းတွင်ရေးသားခဲ့ကြသောကြောင့်လူငယ်များအတွက်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အတိတ်ချက်ချင်းမှတ်မိရန်ပျက်ကွက်သောဤစွမ်းရည်သည်လစ်သူရေးနီးယားစာရေးသားခြင်းကိုကျောင်းများတွင်ဖတ်ရန်မလွယ်ကူပါ။
စိတ်ပျံ့လွင့်စရာအားလုံး၏အားကစားသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အားကစားသမားများကသူတို့၏“ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောအံ့အားသင့်မှု” ကိုမည်သို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်ကိုလစ်သူယေးနီးယားလူမျိုးများကနှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့သိသိသာသာတိုးတက်လာသောအခါမည်သည့်အဖြစ်အပျက်မျိုးတွင်မဆိုအကျွမ်းတဝင်မရှိသောအားကစားသမားများအကြောင်းကိုအနည်းဆုံးစဉ်းစားလိမ့်မည်။ အမျိုးသားများသည်အားကစားသည်အဓိကကျသောကဏ္ဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသမီးမြောက်မြားစွာသည်အဓိကအဖြစ်အပျက်များနောက်သို့လိုက်ကြသည်။
အထူးသဖြင့်ဝေါဟာရ၏အစတွင်ကမ္ဘာအနှံ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးမျိုးကိုဗဟိုပြုသည့်အခါသမယများရှိသည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောခွဲစိတ်မှုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးအနီးအနားရှိအပေါင်းအသင်းများပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အပြင်သို့ထွက်ခွာခြင်းအပြင်လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင်အရွယ်အစားအနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်းသည်အိမ်မွေးဖွားလာသည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြီးမားသောဇုန်များရှိသည်။ အများပိုင်ဥယျာဉ်များ၊ သင်ပုံမှန်မဟုတ်သောလမ်းကြောင်းများ၊ ကယက်လှေသို့မဟုတ်စက်ဘီးကိုတက်နိုင်သည်။ သင်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမှာ - အခြားတောင်ထိပ်များမှလေကိုရောင်ရမ်းခြင်း၊ စွန့်ပစ်ထားသည့်လက်နက်အင်အားစုများရှိ paintball သို့မဟုတ် wakeboarding ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုသည်သင်လစ်သူယေးနီးယားတွင်ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရမည့်အရာများထဲတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ များစွာသောနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်လစ်သူယေးနီးယားလူမျိုးများသည်သူတို့၏အခမဲ့စွမ်းအင်စားခြင်း၊ တီဗွီကြည့်ခြင်း၊
အမျိုးသားအများစုသည်ထိုနည်းတူစွာအမျိုးသမီးများသည်အားကစားနည်းများကိုနှစ်သက်ကြပြီးလူကြိုက်များသောပုံစံလည်းဖြစ်သည်။ စားသောက်ဆိုင်များတွင်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအစားအစာများလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာမှုမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ လစ်သူယိုးနီးယားလူမျိုးများသည်သူတို့၏အိမ်၌မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လစ်သူယေးနီးယားအစားအစာများကိုမှီခိုအားထားကြသည်။ လစ်သူယေးနီးယားအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားအနည်းငယ်သည်သော့ချက်သည့်ဟင်းလျာများကိုမည်သို့ကောင်းစွာတပ်ဆင်ရမည်ကိုသဘောပေါက်ကြသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့်အချက်များအရ၊ ၎င်းသည်အဓိကဖျော်ဖြေရေးသမားများနှင့်တီဗွီဇာတ်ကောင်များကိုလူသိများသောအမည်များဖြစ်စေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လစ်သူယေးနီးယားများသည်အနီးအနားရှိတီဗီရှိုးများ၊ အများအားဖြင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောရုပ်ရှင်များ (လစ်သူယေးနီးယားရုပ်ရှင်ပြန်ထိုးပြမှုများရှိသော်လည်း) နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောနှင့်အနီးအနားရှိတီဗီအစီအစဉ်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်လေ့လာကြသည်။ ရုပ်ရှင်ကားများကိုလူသိနည်းသော်လည်းပြဇာတ်ရုံသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်ဂုဏ်ပြုခံရသည်။
မိမိတို့၏အားကစားသမားများသည်သူတို့၏“ အများပြည်သူဆိုင်ရာပြောင်မြောက်မှု” အားမည်သို့ကာကွယ်ပေးသည်ကိုလစ်သူယေးနီးယားလူမျိုးများကသဘောကျနှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အလွန်တိုးတက်လာသောအခါမည်သည့်အဖြစ်အပျက်၌မဆိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသောအားကစားသမားများအကြောင်းကိုအနည်းဆုံးစဉ်းစားလိမ့်မည်။ အမျိုးသားများအတွက်အားကစားသည်လူသိများသည်ဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသမီးမြောက်မြားစွာသည်အဓိကကျသောအချိန်အခါများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အချို့သောအမျိုးသမီးများ၏ယဉ်ကျေးမှုများသည် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောစတိုင်ကိုနှစ်သက်သော်လည်းအချို့သောအနုပညာလက်ရာများသည်အနောက်တိုင်း၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်တူညီနေသည်။ လစ်သူယေးနီးယားလူမျိုးများသည်သဘာဝတရားနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိကြသည်။ လူတန်းစားကျောင်းကဲ့သို့အချိန်တန်လျှင်စတင်သည်။ အများပြည်သူ၏တေးဂီတ၊ ပြည်သူ့ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ဆိုဗီယက်စနစ်အောက်ရှိဘဝကိုပြန်ပြောင်းအမှတ်ရမိသူများထဲတွင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြaနာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူခြင်းသည်ပြည်သူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ပေါင်းစည်းခြင်းအချက်ဖြစ်သည်။
လစ်သူယေးနီးယားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ Residency အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ လစ်သူ
C စီးပွားရေးဗီဇာ / D နှစ်ရှည်ဗီဇာ / ယာယီနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
လစ်သူယေးနီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလစ်သူယေးနီးယားကုမ္ပဏီမှတဆင့် လုပ်၍ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် ၅ ခုဖန်တီးသည်
တိုင်းပြည်အတွင်းရှိစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေရန်အတွက်လစ်သူယေးနီးယားအစိုးရသည်မကြာသေးမီကလစ်သူယေးနီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည်စစ်မှန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲလစ်သူယေးနီးယားနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်စီစဉ်ထားသောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှအယောင်ဆောင်ပြီးကုမ္ပဏီများအားထည့်သွင်းခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ပြင်ဆင်ချက်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိလစ်သူရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရ၊ အီးယူမဟုတ်သောနိုင်ငံသားများသည်အောက်ဖော်ပြပါလိုအပ်ချက် (၆) ခုနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လဲလှယ်ခြင်းအတွက်လစ်ဗျားနိုင်ငံသားနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ရရှိနိုင်သည်။
နေထိုင်ခွင့်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်အနည်းဆုံး ၆ လတာကာလအတွင်းလစ်သူယေးနီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်သင့်သည်။
လစ်သူယေးနီးယားကုမ္ပဏီသည်အနည်းဆုံးလစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံသား ၃ ဦး ကိုခန့် ထား၍ ၄ င်းတို့၏လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့မှုများကိုပေးသင့်သည်။ လစ်သူယေးနီးယားတွင်လစဉ်လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့မှုပမာဏသည်လူတစ် ဦး အတွက်ယူရို ၁၆၀ ခန့်ရှိသည်။
ယူရို ၂၈.၀၀၀ ရှိသောရှယ်ယာအရင်းအနှီးကိုလစ်သူယေးနီးယားကုမ္ပဏီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊
အစုရှယ်ယာအရင်းအနှီးအနည်းဆုံး EUR 14.000 သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးဖြစ်သင့်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်လစ်သူယေးနီးယားကုမ္ပဏီတွင် ဦး ဆောင် ဦး ရွက်ပြုသင့်သည်၊
လစ်သူရေးနီးယားတွင်နေထိုင်ရန်နေရာ (တိုက်ခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်အိမ်တစ်လုံး) တွင်သန့်ရှင်းသောလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီစေရန် (ဥပမာ - ထိုနေရာတွင်နေထိုင်ရန်ကြေငြာသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အနည်းဆုံး ၇ မီတာမီတာ) ရှိကြောင်းသက်သေပြရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားတောင်းဆိုသည်။
အီးယူမဟုတ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်အထက်ပါအချက်များအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီပါကလစ်သူယေးနီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသည်တစ်နှစ်သက်တမ်းနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ တစ်နှစ်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်အထက်ပါလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီပါကခွင့်ပြုမိန့်ကိုနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ သို့သော်နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး သည်ယူကရိန်း ၂၆၀.၀၀၀ ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးလစ်သူယေးနီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့အနည်းဆုံး ၅ ဦး ခန့်နေထိုင်သည်ဆိုပါကသူသည်ကန ဦး နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးနှစ်ရရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့နေထိုင်ခွင့်ကို ၃ နှစ်တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
ထို့အပြင်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ရရှိရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်တစ်နှစ်လျှင် (၆) လထက်မနည်းနေထိုင်ပြီးလစ်သူယေးနီးယားတွင်နေထိုင်ရန်တောင်းဆိုထားသည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားသူ / သူမလုပ်ကိုင်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အတုမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ လစ်သူယေးနီးယားအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏လစ်သူယေးနီးယားမှသူတို့၏မိသားစုများကိုလစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လစ်သူယေးနီးယားမှဖြစ်စေ၊ လစ်သူးနီးယားမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သက်သက်သာသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်လစ်ဗျားမှလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်စေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှဖြစ်စေနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဏ္orာရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သောလစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၊
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ငါတို့တတ်နိုင်တဆင့်လစ်သူယေးနီးယားအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ လစ်သူယေးနီးယားအတွက်လစ်ဗျားအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ဆောင်၊ လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊
လစ်သူယေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့လစ်သူယေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
လစ်ဗျားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
စီးပွားရေးကို အခြေခံ၍ လစ်သူယေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချခြင်း။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့လစ်သူယေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံမှလစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်သည်လစ်သူယေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဖြစ်သည်။
လစ်သူယေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လစ်သူယေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်လစ်သူယေးနီးယားရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့မှုပေးသည်။ သူတို့ကသူတို့နေထိုင်မှုအတွက်လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လစ်သူယေးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးလစ်သူယေးနီးယားရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏ Residency သည်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်လစ်ဗျားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ လစ်ဗျားသို့မဟုတ်လစ်သူယန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုလစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံမှ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။
လစ်သူယေးနီးယားအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူလစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်စ်တယ်လီယမ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်လစ်သူမမ်ားနှင့်ရွှေဗီဇာတို့ဖြင့်ဖြည့်သွင်းသောပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လစ်သူနေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်ဖြစ်သည် ကုန်သည်များနှင့်လက်ဝယ်ရှိလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းသို့မဟုတ်လစ်သူယေးနီးယားသို့ရောင်းချခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် လစ်သူယေးနီးယားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်လစ်သူယန်နီးရှိသို့မဟုတ်သို့သွားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားစက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံခြင်းအားဖြင့် လစ်သူယေးနီးယားရှိတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် လစ်သူယေးနီးယားအတွက် လစ်သူယေးနီးယားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်ဖြစ်သည် လစ်သူယေးနီးယားရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ လစ်သူယေးနီးယား၌သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောလစ်သူယေးနီးယားမှလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုထောက်ပံ့မှုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် လစ်သူယေးနီးယားအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု လစ်သူယေးနီးယားအတွက် လစ်သူယေးနီးယားရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်သူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက လစ်သူ လစ်သူယိုးနီးယားရှိညစ်ညမ်းစာပေများရောင်းဝယ်သူများကိုမထောက်ပံ့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် လစ်သူရေးနီးယားရှေ့ရပျ လစ်သူယေးနီးယားရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်လစ်သူယန်းများနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်လစ်သူယေးနီးယားမှအာဏာပိုင်များကငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် လစ်သူယေးနီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
International Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်လစ်သူယေးနီးယားတို့၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များဖြင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးအဖြေများဖန်တီးသည်။
ကျွန်တော်တို့၏လစ်ဗျားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်လစ်သူယေးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုလစ်သူရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်လစ်ဗျားနိုင်ငံ Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးပေးသည့်လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့ရွက်တောင်းသူများနှင့်လစ်သူယေးနီးယားမှတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များသည်အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏လစ်သူရေးနီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်မပြုမီနှင့်ခွင့်ပြုချက်ရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်လစ်သူယေးနီးယားအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးလစ်ဗျားအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း။
အမှု၌၊ လစ်ဗျားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residence မှ Litwan သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကုန်ကျငွေကိုတွက်ချက်ပါ
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလစ်သူယန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏သက်တမ်းအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရ Residency အတွက်ကုန်ကျငွေနှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ လစ်သူယေးနီးယားအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လစ်သူယေးနီးယားမှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူလစ်သူယေးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လစ်သူယေးနီးယားနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်တတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းဖြင့်လစ်သူယေးနီးယားတွင်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
လစ်ဗျားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းမှ Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လစ်သူယေးနီးယားတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလစ်သူယေးနီးယားနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံတို့အတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည့်လစ်သူယေးနီးယားမှအခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ခုအောက်တွင်မတွေ့ရပါ။
မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ လစ်သူယေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (လစ်သူယေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
လစ်သူယေးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် လစ်သူယေးနီးယားရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် နှင့်လစ်သူတေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်း၊ ကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, လစ်သူနေးအတွက်အတိုင်ပင်ခံလိုအပ်ပါတယ် လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် လစ်သူယေးနီးယားမှရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင်လစ်သူယေးနီးယား လစ်သူယေးနီးယားရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
လစ်သူယေးနီးယားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ လစ်သူယေးနီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် လစ်သူယေးနီးတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
လစ်သူယေးနီးယားအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
လစ်သူယေးနီးယားအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ လစ်သူယေးနီးယားအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
လစ်သူယေးနီးယားရှိ Virtual Office လိပ်စာ
လစ်သူယေးနီးယားရှိ Setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း လစ်သူ.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုလစ်သူနီးယားမှပေးသည်
လစ်သူယေးနီးယားရှိ Web Design
လစ်သူယေးနီးယားရှိ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
လစ်သူယေးနီးယားရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
လစ်သူယေးနီးယားရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုလစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံသည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်လတ်တလောတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ လစ်သူယေးနီးယားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်လစ်သူယန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းရှိသည်။
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်လစ်သူရေးရာအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်လစ်သူယေးနီးယားသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်လစ်သူယေးနီးယားသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့မှသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်လစ်သူရေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားရှေ့နေအားတရားဝင်တရား ၀ င်အသိအမှတ်ပြုသင့်ပြီးလစ်သူယေးနီးယားနယ်မြေတွင်အသုံးပြုရန်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်လစ်သူယေးနီးယားကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှနေထိုင်ခွင့်
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းဖြင့်လစ်သူယေးနီးယားစီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်လစ်သူနေးရှင်းအဖြစ်နေထိုင်ခြင်းကိုလစ်သူယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ လစ်သူယေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ လစ်သူယေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှု၊ လစ်သူယေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ လစ်သူယေးနီးယားမှာ။
လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် လစ်သူယေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း လစ်သူယေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် လစ်သူယေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်စီးပွါးရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်လစ်ဗျားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူခြင်း၊ လစ်ဗျားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လစ်သူယေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနိုင်ငံသားနှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုလစ်ဗျားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများလုပ်ကိုင်ခြင်း အကောင်းဆုံးမှာလစ်သူယေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏နိုင်ငံသားနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု စျေးပေါသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရွက် စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလစ်သူယေးနီးယား | စျေးပေါသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှအကြံပေး | စျေးသက်သာသည့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုလစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားမ ၀ င်နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံခြင်းစသည်တို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ လီတာအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လစ်ဗျားရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ လစ်ဗျားရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်လစ်ဗျားအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ လစ်ဗျားရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု လစ်ဗျားရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ လစ်ဗျားနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်လစ်သူယေးနီးယားစီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်လစ်သူမင်၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ လစ်ဗျားသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားပါ။ လန်ဒန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ လစ်ဗျားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်လစ်သူအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ လစ်ဗျားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လစ်သူရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်လစ်သူယိုးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
လစ်သူယေးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | လစ်သူယေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ လစ်သူယေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ လစ်သူယေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ လစ်သူယိုးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာလစ်ဗျားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပြီးယူရို ၃၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်လစ်သူယေးနီးယားကိုတရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်, လစ်သူယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်လစ်သူမှအေးဂျင့်များသည်လစ်သူနေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်လစ်သူယေးနီးယားမှ Residency သည်အကုန်အကျများပါသလား။
လစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်လစ်သူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်အရ Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency အတွက်လစ်သူနေးရှင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များလည်းပေးသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံသားများသည် Residency လျှောက်ထားနိုင်သည်ကိုလစ်သူးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (သို့) လစ်သူရေးရှင်းဗီဇာဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလဲ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှလစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှလစ်သူယေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှလစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှလစ်သူယန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှလစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှလစ်သူယမ်နီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှလစ်သူယန်းနိုင်ငံများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှလစ်သူယန်းနိုင်ငံများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နီပေါမှလစ်သူယန်းနိုင်ငံများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ယူအေအီးမှလစ်သူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု လစ်သူယေးနီးယားအတွက်
နိုင်ငံတော် Forensic ဆေးပညာဝန်ဆောင်မှု
ဘဏ္Financeာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိပြည်နယ်အခွန်စစ်ဆေးရေး ဦး စီးဌာန
ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်အားကစား ၀ န်ကြီးဌာန
ပြည်နယ်လုံခြုံရေး ဦး စီးဌာန
တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိထောင်ဌာနလေ့ကျင့်ရေးစင်တာ
တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိဥရောပဥပဒေဌာန
ပတ်ဝန်းကျင် ၀ န်ကြီးဌာန
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိရွှေ့ပြောင်းဌာန
link ကိုမှ လစ်သူရေး၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦး စီးဌာန လစ်သူရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်ရေးအတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်